Soosaarayaasha Neckchiefs - Shirkadaha Shiinaha & Shirkadaha Neckchiefs
Astaamaha loo yaqaan 'CHECKEDOUT Shayga' Code Code U502S0100A Cabbirka KALKA SIZE Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'cheer suger accessories', madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-dhimis lahayn, kansar-qaba, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Madaxa maqaayada makhaayadda madax ka ah CU504S161000T4
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU504S161000T4 Cabbirka KALKA KHUDBADA ereyada furaha ah ee dharka lagu rakibo, dharka qoorta, taliyayaasha waardiyaha, Dharka dharka hoyga 60/40 poly / suufka GSM.143g Xinjiang Aksu suuf dheer-dhejis ah, bilaa biya-shubis ah, wax-is-bedelin, carcinogens, nolosha adeegga waa 2 jeer sida jaakad qafis caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Himilo awgeed ...
Maqaayadda maqaayadda kafateeriyaha maqaayadaha leh qoorta madaxa U502S1100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U502S1100A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-uruur lahayn, kar-dillaac la'aan, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyaha kusheega madaxa qoorta U501S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U501S0100A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer ah, mala-bixin, bir-jab, maya-kar, kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda maqaayada kafateeriyada maqaayadaha madax u qoorta U503S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U503S0100A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-uruurid, cillad la'aan, kansar, nolosha adeegga waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda maqaayada kafateeriyada maqaayadaha madax u qoorta U501S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U501S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer ah, mala-bixin, wax ciriiri ah, majirto kansar, nolosha adeega waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda maqaayada kafateeriyada maqaayadaha madax u qoorta U503S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U503S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee dhejiyaha qalabka sugaya, madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-uruurin, carcinogens, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...
Maqaayadda kafateeriyaha kafateeriyada kusheega madaxa qoorta U501S0400A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U501S0400A Cabbirka KOOX SIINE Erayada muhiimka ah ee qalabka sugida, qalabka madaxa qoorta Wejiga 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dheer, cuf-la'aan, wax-dhimis la'aan, kansar-qabe, noloshu adeegtu waa 2 jeer sida jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, iska caabin-la'aanta wanaagsan, l ...